Hombe nyoro inotonhorera bhegi Vagadziri & Suppliers - China Hombe nyoro inotonhorera bhegi Factory
Yakakura-Capacity Camouflage Outdoor Cooler Backpack
Chibhegi chekunze chine makoni makumi matatu ehukuru.Isingapindi mvura TPU zvinhu, yakanakisa dhizaini dhizaini, hukuru hukuru, uye kupfeka-inodzivirira mhando.Kunyangwe iwe uri kumisasa, pikiniki, kubuda, kukwira makomo, kana kunyange nhandare yehondo chaiyo, inogona kunyatsogona.
Inotakurika Yakakura Yakakurisa Yakapfava Backpack
Yepamusoro-soro yekunze inotakurika inotonhorera musana.Iyo yepamusoro-mhando 840D-TPU zvinhu uye mhepo-yakasimba zipper inovimbisa kusapinda kwayo kwemvura.Dhizaini yebhegi inosimudzira zvakanyanya kutakurika kwayo.Iyo yakakura huwandu hwemagaba makumi maviri nenhanhatu inosangana nezvako zvakawanda zvekuchengetedza zvinodiwa.Isa chikafu chako chese, zvinwiwa, mishonga, nezvimwe.
Insulated Lunch Bag Inotonhorera
Zvakafanana nefiriji diki yekunze iyo inogona kutakurwa pasina kuvharirwa mukati. Unogona kuisa michero, zvinwiwa, nyama, doro, nezvimwewo mukati kuti zvichengete zviri zvitsva uye zvinotonhorera, uye zvinogonawo kushandiswa kuchengetedza mukaka wezamu, mishonga, majekiseni, zvichingodaro.
Panze pemvura inotonhorera bhegi rinotonhorera, makumi matatu emagaba ekukwanisa, kaviri-mapfudzi dhizaini, kuitira kuti iwe ugone kusunungura maoko ako uchitakura chikafu chakawanda.Hunza iyo BD-001-37 inotonhorera yekunakidzwa kunonakidza.